Usoro innection annealing
Usoro nhazi Induction
HLQ Induction bụ onye ndu na ntinye udu oku Ntinye ihe ntinye na-eme ka njikwa na ngwongwo nke ihe eji eme ihe. A na-ejikarị ihe ndị na-eme ka ndị na-eme ihe na-eme ihe na-eme ka ọ dị nro na nchekasị-enyemaka, na-enye nnukwu uru karịa usoro ndị a na-emekarị. Ntinye nke na-ekpo ọkụ na-eme ka iwepụ ọkụ dị ọcha n'oge annealing na-enwu gbaa. Ntinye ihe ntinye na-ejikarị eme ihe na nkedo na nchekasị na-enye nsogbu ma na-enye nnukwu uru karịa usoro ndị a na-eme.
Ntuchi Mgbakwunye bụ ọgwụgwọ igwe eji eji ihe igwe mee ka ekpughere ya na ọnọdụ dị elu maka ogologo oge wee jiri nwayọ nwayọ. A na-ejikarị mgbatị na-emetụta ihe mkpuchi dị iche iche na-agbanwe agbanwe nke na-abụkarị ọrụ maka ịgbanwe ngwongwo ihe onwunwe. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke usoro a bụ iji belata ike nke ígwè ahụ ma melite ductility ya.
Ọrụ mmezi ndị a na-ewepụta na-ekwu maka usoro iwebata ihe ahụ ruo n'ọnọdụ kachasị dị nro. Usoro anyi na eme ka igwe di njo di nro ma enweghi ike zuru oke. Ogo iwe ya dabere n'ihe a na-ahụ, ọnụọgụ kachasị kacha erute na ogologo oge iji daa. A na-eji usoro ma ọ bụ mgbakasị ahụ enyere aka mee ka nsogbu ndị ọrụ oyi ghara ịrụpụta; ya bu, ime ka nkpuru-obi di nkpa ka ọ di nro. Ihe nrụgide dị n'ime nwere ike tolitere site na usoro nrụrụ nke plastik dịka igwe ma ọ bụ egweri, igwe anaghị ejikọ ya na usoro ịgbado ọkụ ma ọ bụ mgbanwe usoro. Imebi na ịlụ ọgụ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ewepụghị nrụgide dị n'ime. Annealing ga-ewepụ nrụgide ndị a mgbe a na -eme ka akụkụ ahụ dị ọkụ ma ọ bụrụ na a na-atụ aro ya, ebe a na -ewere ya ogologo oge, ma jiri nwayọ nwayọ gaa na-ekpo ọkụ ụlọ.
Kedu ihe kpatara eji annealing?
Ngwunye ọkụ nke oge a na-enye ọtụtụ uru karịa ụzọ ndị ọzọ a na-ekpo ọkụ ma na-ejikarị ya maka ngwa mgbakwunye. Atingkpọ oku site na ntinye na-enye ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, a na-ekwughachi, na-enweghị ịkpọtụrụ na ike-arụ ọrụ ike na obere oge. Sistemụ steeti siri ike nwere ike ikpo ọkụ pere mpe obere mpaghara n'ime nnwepụta nrụpụta ziri ezi, na-enweghị nsogbu ụdị njirimara igwe. Enwere ike iji ntinye mee ihe maka ma ọ bụ elu ma ọ bụ site na kpo oku; ikpe mgbakwunye nwere ike ịdabere na oge, okpomọkụ na njirimara ihe ahụ.
Ngọnarị ikuku dị n’ime ahụ bụ aha ana --ekwu banyere ite ọkụ n’ọkụ n’ọkụ rue etu o siri pụta, ma meekwa ka ọ dị jụụ n’ime nke a ga - ewepụta microstructure a nụchara anụcha. Site na iji Induction, a ga-eme ka ngwa ngwa kpoo okpomoku ka o wee kpuchie okpukpu a na-achịkwa ugboro ugboro na-enweghị kọntaktị nke metal ma ọ bụ kpo oku ikuku gburugburu ya. A na-amụnye ikuku anwụrụ ọkụ maka ọla ndị na-eme ka ọkụ kọọ. A pụrụ idozi ọla ndị na-adịghị anụ ọkụ, ọla kọpa ma ọ bụ ọla nchara ahụ ngwa ngwa site n'ịgbanye na mmiri. Nsonaazụ “mee ka” dị nro ma mee ka ọ dịkwuo mfe ọfụma n'ụdị chọrọ.
Ntuchi Mgbakwunye A na-ejikarị nhazi waya, nhazi ngwa ọrụ, yana ịmepụtara ngwa. Ihe ndị a na-ahụkarị maka ịbanye n'ime ikuku gụnyere alumọn, carbon carbon, na carbide. Offọdụ uru nke mgbanye Induction bụ: ike na -achụ; ngwa ngwa nke okpomoku; kpochapu ikike na - aga n’ihu na mpaghara kpo oku buru ibu (ya bu tan oku); ego a na-echefu n'ihi belata ike ojiji; kpo oku ozugbo nke igwe ma obughi ikuku ambient dị ka usoro convection; usoro nchekwa karie usoro ọkụ; njikwa usoro kachasị mma maka ọbụna kpo oku na kpo oku edo edo ka ọ na-enye okpomọkụ na-adịghị adabere na nka ọrụ.
Kedu ihe kpatara ntinye HLQ maka innection innection?
Anyị bụ ndị isi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ induction kpo oku na ọfịs na China.
Mgbakwunye na-emechi bụ ụdị ọgwụgwọ okpomoku site na ngbanye ọkụ, kpọnye igwe ka ọ gbue ala ma gbanye ya n'ogo nke ga - emepụta microilite amachaghị. N'iji okpukpo Induction, a ga-eme ka ngwa ngwa kpoo okpomoku ka o wee kpoo okpomoku n’ọkụ ugboro ugboro n’abataghị ihe a chọrọ iji mee ya, a na-agbanye mmiri n’ọkụ. Nsonaazụ “mee ka” dị nro ma mee ka ọ dịkwuo mfe ọfụma n'ụdị chọrọ.
Uru nke annealing site na ikpo oku induction:
1. Ọnụego nrụpụta dị elu
2. Obere ebe a na - ekpo oku na - achoghi ike.
3. Chekwaa onu ahia n'ihi ubara erimeri na onu ahia nke belata
4. Mfe ijikwa oge kpo oku na okpomọkụ
Maka na anyị nwere ọkachamara na ikpo ọkụ induction, ndị ahịa anyị na-erite uru site na ngwakọta nkwanyeghị mgbanye induction n'ọtụtụ ọrụ.
Ndị ahịa anyị na-ezere ịkọwapụta oke na njikwa akụkụ site na iji annealing abanye, nke na-ebute mkpofu na nsonaazụ ka mma na ọnụ ala. Anyị nwere teknụzụ kachasị elu, akụrụngwa, na usoro ndị na-ekwenye ekwenye ndị na-emezu ụkpụrụ kachasị mma.